Iphinde yaphakanyiselwa kuma-Grammy Awards iBlack Mambazo | isiZulu
Iphinde yaphakanyiselwa kuma-Grammy Awards iBlack Mambazo
UDr Tumi ushanelile kumaCrown Gospel Awards
I-EFF ifuna osaziwayo bangalubhadi kuma-awards esiteshi samaGupta
Amagama abaqokelwe ama-SA Sport Awards
Cape Town – INingizimu Afrika ikwazile ukuzitholela ukuphakanyiswa kabili kwabazoqokelwa ama-2017 Grammy Awards njengoba ngoLwesibili kwenziwe isimemezelo ngalo mcimbi wezindondo omkhulukazi emhlabeni wonke, nokuzobe sekungowesi-59.
Iqembu lesicathamiya laseNingizimu Afrika, elidume umhlaba wonke, iLadysmith Black Mambazo, lithole ukuphakanyiswa kwabazoqokelwa indondo emkhakheni weBest World Music Album, nge-Albhamu yabo ethi Walking In The Footsteps Of Our Fathers.
OLUNYE UDABA: I-EFF ifuna osaziwayo bangalubhadi kuma-awards esiteshi samaGupta
Lokhu kwenza kube yihlandla lesi-17 leli qembu liphakanyiselwa kwabazoqokelwa izindondo kumaGrammy Awards.
ILadysmith Black Mambazo isike yahlabana ngezindondo zamaGrammy Awards izikhathi ezine ngaphambilini. Ngonyaka ka-1998 bawina nge-albhamu yabo ethi Shaka Zulu; ngo-2004, nge-albhamu ethi Raise Your Spirit Higher; ngo-2009, ngethi Ilembe kanye nango-2013, nge-albhamu ethi Singing For Peace Around The World.
Ngaphezu kwalokho nomfuthi we-piono ongowokudabuka eNingizimu Afrika, uKristian Bezuidenhout, uqokelwe emkhakheni weBest Classical Instrumental Solo. Naye ubengaqali ukuphakanyiselwa kumaGrammy Awards njengoba eseke waqokelwa izikhathi ezimbili ngaphambilini.
Umcimbi wesi-59 waminyaka yonke wamaGrammy Awards uzoba mhla zingu-12 kuFebhuwari, eStaples Center, eLos Angeles.
Unontandakubukwa onguZodwa Wabantu uthi uyaluthanda ushintsho olwenzeka empilweni yakhe njengamanje njengoba esengene ekulingiseni.